रेडियो कार्यक्रमले आत्मबल बढायो । | Saathi Sanga Manka Kura
Home › Blogger's Belt › रेडियो कार्यक्रमले आत्मबल बढायो । ›
रेडियो कार्यक्रमले आत्मबल बढायो ।
February 22nd, 2012 11:51 am
in रेडियो कार्यक्रम
पहिले पहिले नाटक सुन्नको लागि साथीसँग मनका कुरा कार्यक्रम सुन्ने गदथे पछि बस्तारै सुन्दै जादा त्यहाँ बज्ने हरेक कुराहरु उपयुक्त लाग्न थाल्यो त्यसपछि त उक्त रेडियो कार्यक्रम अहिले सम्म निरन्तर सुनि रहेको छु । कहिले काहि कार्यक्रम सुन्न छुट्दा अरु एफ. एम.बाट सुन्छु नत्र अरु साथीहरुलाई कार्यक्रमको बारेमा सोध्ने गर्दछु ।
उक्त भनाई हो सुशिला राईको , उहाँ अहिले कक्षा १२ को परिक्षा दिएर बस्नु भएके छ । उहाँ साथी सँग मनका कुरा कार्यक्रम विगत ४ वर्ष देखि निरन्तर सुन्दै आउनु भएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ म कार्यक्रम सुन्न थालेपछि मेरो हरेक नराम्रा बानीहरु सुधारेको छु भनि आफुप्रति आत्म जागरुक हुन पनि सिकेको छु । पहिले पहिले मेरा कुराहरु घरमा राख्दा परिवारका मान्छेहरु सहमत हुनुहुदैनथियो । म मेरो इच्छाहरु पुरा गर्न घरमा झगडा समेत गदथ्ये । त्यसले गर्दा मेरो घरमा तनाव हुन्थ्यो । म जहिले निरास हुन्थ्ये । साथी सँग मनका कुरा नियमित सुन्न थाले पछि मैंले जिवन उपयोगि सिपहरुको बारेमा जानकारि पाए मैले मेरो कुराहरु घरमा राम्रो तरिकाले बुझाएर राखे । झगडा नगरि आफुले चाहेको कुरा के हो त्यस बाट के फाइदा हुन्छ त्यो समेत परिवारलाई बुझाएपछि मेरो कुराहरु घरमा सुन्न थाल्नुभयो ।
मेरो इच्छाहरु पुरा भए जसले गर्दा म र मेरो परिवारलाई नै राम्रो भएको छ। त्यसै गरि उहाँ भन्नुहुन्छ म ठुलो मान्छेको छेउमा बोल्न डराउथ्ये भने कक्षामा पनि साथीहरुसँग शिक्षक सँग खुलेर कुरा गर्न सक्दिनथ्ये । साथीहरुले राम्रा काम गरेको देख्दा म आफुलाई केहि गर्न नसक्ने ठान्थ्ये । जब कार्यक्रम नियमित सुन्दै गए म मा आझै आत्म जागरुक बन्दै गए । आफुमा भएको सफल पक्षको पहिचान गर्न थाले जसले मेरो आत्म बल बढ्न थाल्यो । विद्यालयमा हुने अतिरिक्त कृयाकलापहरु खेलकुद बक्तृत्वकला, हाजिरी जवाफ जस्ता विभिन्न कृयाकलापहरुमा भाग लिन थाले । जसले गर्दा मलाई सवैसंग घुलमिल हुन सजिलो भयो । अहिले म सबैसँग खुलेर कुरा गनु सक्छु अरुको सामु आफ्नो कुराहरु प्रस्ट राख्न सक्छु ।
सुशिला राई सुनसरी जिल्लाको हासँपोषा गा.वि.स मा बस्नु हुन्छ । आफु जस्तै अन्य साथीहरु जो साथीसँग मनका कार्यक्रम सुन्नु हुन्छ उहाँलाई पनि एक जुट गरि आफु अध्ययनरत विद्यालय श्री जनसहयोग उच्च मा.वि. हासँपोषा सुनसरीमा साथीसँग मनका कुरा रेडियो कार्यक्रमको श्रोता क्लब समेत खोल्नु भयो । जसको नाम एकता साथीसँग मनका कुरा श्रोता क्लब रहेको छ । क्लब खोलेपछि उहाँहरुले कार्यक्रम नियमित सुन्ने अन्य साथीहरुलाई पनि सुन्न उत्प्रेरित गराउने देखि लिएर क्लब मार्फत चेतना मुलक कार्यक्रम समेत गर्नुभयो । साबुन पानीले हात धौयौँ अभियान , सरसफाइ सम्बन्धी विद्यालय स्तरको ब्कतृत्वकला कार्यक्रयम समेत सम्पन्न गरिसक्नु भएको छ । त्यसै गरि उहाँहरुले क्लब मार्फत फुलबारी नामक मासिक पत्रिका समेत प्रकासित गर्नु भएको छ जसको सम्पादकमा सुशिला राई हुनुहुन्छ ।
भरखरै मात्र साथीसँग मनका कुरा कार्यक्रममा आफ्नो क्लवको कार्यक्रम प्रस्ताव स्वीकृती भए पछि अव उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गर्न लागीरहेको बताउनुहुन्छ शुशिला राई ।